Nkwado akparamaagwa - Anụ ụlọ bụ otu n'ime enyemaka gị kacha mma | Bezzia
Ha bụ ndị ama ama na ndụ anyị kamakwa ahụike anyị. N'ihi na anu ulo aghọọla otu nnukwu nkwado mmụọ maka ọtụtụ ihe dị iche iche. Yabụ, ọ dabara adaba ịmara ha, n'ihi na ọ bụrụ na ịnweghị anụmanụ gburugburu gị, ọ bụ oge.
Ịzụta anụ ụlọ ga -abụ otu n'ime ihe kachasị mma ị ga -eme na ndụ gị. Ọ bụghị naanị maka inye ya ụlọ na mmetụta enweghị atụ, mana n'ihi na ọ ga -enyeghachi gị ya n'ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ. Ọ bụ oge ịchọpụta ihe kpatara ha ji bụrụ nkwado mmụọ nke anyị na -ekwu ọtụtụ ihe.
1 Mkpali ịpụ n'ụlọ
2 Anụ ụlọ na -enye anyị nnukwu ụlọ ọrụ
3 Nkwado gbasara akparamaagwa: Ha na-akwalite ùgwù onwe onye
4 Ha na -enyere anyị aka inwe ibu ọrụ
5 Mee ka nrụgide ahụ kwụsị
6 Ahụ́ na -eru anyị ala
Mkpali ịpụ n'ụlọ
Mgbe anyị na -aga ajọ ọnọdụ, n'ihi ihe dị iche iche, ọ na -efu anyị nnukwu ego ịhapụ ụlọ. Ọnọdụ nchegbu ma ọ bụ ọbụna ịda mba nwere ike ịpụta na ndụ anyị na -enweghị ịdọ aka na ntị. Ya mere, ọ bụ eziokwu na enwere usoro ọgwụgwọ ọ bụrụhaala na anyị etinye onwe anyị n'aka ndị ọkachamara. Mana n'aka nke ọzọ, anụ ụlọ ga -abụ otu n'ime nnukwu nkwado mmụọ. Maka na ị nwere ọrụ dịịrị ha, ọ dị ha mkpa ịpụ n'ụlọ, were nzọụkwụ ha wee zuo ike. Nke a na -agba gị ume ikuku onwe gị ọbụlagodi mgbe enweghị mmeri dị ukwuu.
Anụ ụlọ na -enye anyị nnukwu ụlọ ọrụ
Mmetụta ọzọ na -adịghị onye ọ bụla kwesịrị inwe bụ nke owu ọmụma. N'ihi na nke a na -eme ka onye ahụ daa mmụọ na mmụọ, nke mmụọ nwere ike ibute. Ya mere, anụ ụlọ ga -anọ ebe ahụ inyere aka mgbe ọ kacha dị ha mkpa. Karịsịa, mgbe mmadụ nwụnahụrụ anyị ma chọọ nkwado, ọ nweghị ihe dị ka anụmanụ nwere ịhụnanya na -enweghị atụ., nke anyị ga -ahụ na nlele ha na mmegharị aka ha, ka ha wee nwee ike bulie mmụọ anyị nke nta nke nta, bulie anyị site na olulu mmiri ahụ nke anyị na -enwe mmetụta mgbe ụfọdụ.
Nkwado gbasara akparamaagwa: Ha na-akwalite ùgwù onwe onye
Gịnị mere inwe ùgwù onwe onye ji dị oke mkpa? N'ihi na ọ na-amasị inwe ọnọdụ ka mma na n'ezie, ọdịmma n'ozuzu ya. Ihe dị mkpa maka ụbọchị ọ bụla, kamakwa, ka anyị nwee ike imezu ihe niile anyị tụpụtara. Ma mgbe ụfọdụ ọ naghị adịrị ya mfe ịnọnyere ya. Ugbu a, anụ ụlọ ga -enyere aka karịa ka ọ dị na mbụ, n'ihi na anyị ga -ahụ ọrụ a rụrụ, anyị ga -enwekwa obi ụtọ maka ilekọta anụ ụlọ anyị. Nke na -eduga anyị ka anyị jiri onwe anyị kpọrọ ihe.
Ha na -enyere anyị aka inwe ibu ọrụ
Anyị amaghị ihe na -abara anyị uru n'ezie ruo mgbe anyị nwere ya n'ihu anyị. Yabụ, ekwesịrị iburu n'uche ibu ọrụ nke inwe anụmanụ, maka na ọ ga -enyere anyị aka kwa ụbọchị. Ị ga na -enwe mmetụta mgbe niile itinye aka na ọrụ dị otu a, yana ọbụbụenyi na ịhụnanya na -enweghị atụ. Anyị ga -enwe ike inwe uche na nke a ga -eme ka ibu ọrụ ka ukwuu. Gịnị bụ ebumnuche nke ihe a niile? Ọ na -adị gị mma, anyị ga -enweta ya site n'otu nkeji. N'ihi ekele anụ ụlọ, anyị ga -achọpụta mmetụta ọhụrụ anyị na -amaghị.
Mee ka nrụgide ahụ kwụsị
Otu n'ime nnukwu nsogbu anyị nwere ike ịhụ na ndụ taa bụ nrụgide. A na -enye nke a site n'ụdị ndụ anyị na -ebi, enweghị ike ị nweta ihe niile na -eme ka anyị nwee nkụda mmụọ. Mana inwe anụ ụlọ n'akụkụ anyị ga -eme ka anyị hụ ya n'ụzọ dị iche. Yabụ naanị ụlọ ọrụ gị ga -enye anyị ohere ịpụ n'ụdị ọrịa a wee mee ya a enyemaka ma ọ bụ mgbake na ndị nwere nkụda mmụọ.
Ahụ́ na -eru anyị ala
Anyị nwere ike ịsị na akụkụ a dị ka nchịkọta nke ndị niile gara aga, ma ọ bụ imirikiti. N'ihi na anyị na ha na -adị anyị ka anyị na ha so, na mgbakwunye na ahụ iru ala n'ihi na ha na -ewepụ nchekasị, otu a kwa ha ga -eme ka obi ruo anyị ala mgbe niile. Anyị nwere ụlọ ọrụ zuru oke na nke a na -eme ka anyị chee na ọ nweghị ihe ọjọọ ga -eme anyị. Yabụ, ihe niile kacha baa uru maka ndụ anyị, ee, kamakwa maka ahụike mmetụta uche anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Psychology na di na nwunye » Psychology » Anụ ụlọ dị ka otu n'ime nnukwu nkwado mmụọ